गङ्गा र मायाको घनिष्ठ मित्रता दुश्मनीमा परिनत, कारण यस्तो । - Staronlinemedia.com
गङ्गा र मायाको घनिष्ठ मित्रता दुश्मनीमा परिनत, कारण यस्तो ।
December 3, 2018 | Gyanlama | 4:01 am
केही समय अघि मात्र एक अर्काको लागी ज्यान दिने होइ डोल्मो होइ पाल्मोझ बोलको गीतको म्युजिक भिडियोमा एकै साथ देखिएका तामाङ साङ्गीतीक क्षेत्रका यी दुई नायिकाहरु गङ्गा मोक्तान र अब एक अर्काको कडा दुश्मनी बने बन्दै मिडियामा छाएका छन । यसको एउटै कारण बनेका छन तामाङ टेलिसिरियल दार्ज्युका कलाकार का निश्चल खत्री । आखिर किन यति राम्रो घनिष्ठ मित्रता दुश्मनीमा परिनत भो त ? के अब गङ्गा र मायाको मित्रता सकेकै होत ? के अब गङ्गा र निश्चललाई एक हुन दिन्छिन त मायाले ? आखिर गङ्गा किन माया छुटाउन अघि बडे त ? के गर्लान अब मायाले आफ्नो माया पाउन ? प्रश्नको कुरो यहाँ छ । तर आदरणीय दर्शक बृन्द यो सब एउटा म्युजिक भिडियोको प्रसङ्ग हो जस्मा यी दुईलाई यसरी बिपरित दिशामा उभ्याएका छन । यो जोडि भित्रको आत्मीय प्रेम माया कति छ त्यो त उनिहरुलेनै महशुस गर्ने कुरा हो ।
केही समय अघि मात्र सार्बजनिक भएको म्युजिक भिडियोमा भने गङ्गा नकारात्मक भुमिकामा देखिएको छ । मायाले एकोहोरो माया गरिराखेको निस्चलको अङगालोमा एकाएक गङ्गालाई देखे पछि माया छाङ्गा बाट खसे जस्तै हुन्छ र माया र गङ्गाको दुश्मनी सुरु हुन्छ । भिडियोमा मायाको अमर निस्चल मायामा घात भएको छ र गङ्गा भिलेन भएर प्रस्तुत भएको छ । नायीका गंगा मोक्तानले यस अघी दर्जनौँ म्युजीक भीडीयो संगै आधा दर्जन तामाङ चलचित्रमा आफ्नो कुशल अभिनय गरीसक्नु भएको छ भने मायाँ यो क्षेत्रको लागी नयाँ अनुहार रहेको छ । यो गीत वाट यी दुईले दर्शकको मायाँ कती पाउने हो त्ये भने हेर्न वाँकी रहेको छ ।
सार्बजनिक गीतमा गजेन्द्र घिसिङको शब्द रहेको छ भने प्रेम लामा मोक्तानको सङ्गीत तथा कर्णप्रीय आवाजका धनी गायिका रजिना रिमालको अवाज रहेको छ । कमल योन्जनले निर्देशन गर्नु भको यश गीतलाई भिम बहादुर तामाङले छायांकन गर्नु भएको छ । श्री म्युजिक कम्पनीको आफ्नै अफिसियल युट्युब च्यानल बाट सार्बजनिक भएको यस गितमा गङ्गा मोक्तान तामाङ आफैले कोरियोग्राफीको पाटो सम्हाल्नु भएको छ ।